Wargaysyada Sweden oo Aan Waxba Ula Hadhin Ethiopia – Rasaasa News
Oct 18, 2011 Wargaysyada Sweden oo Aan Waxba Ula Hadhin Ethiopia
Wargaysyada dalka Sweden ayaa aad u buun buuniyay urur argagixiso ka ah dalka Ethiopia, isla markaasna aad u dhaawacaya sumcada dalka Ethiopia, si ay uga hortagaan xukun gaadhaya 40 sano oo laga yaabo in ay Ethiopia ku fuliso labo wariye oo Swedish ah.
wargayska Presseurop, ayaa qoray qoraal ciwaankiisu yahay “labo wariye, hal wasiir iyo baatrool badan.” oo ay ula jeedo in wasiirka arimaha dibada ee Sweden uu dhaafsanayo labada wariye baatrool. Wasiirka arimaha dibada ee Sweden Carl Bildt oo mar ahaan jiray gudiga maamusha shirkada Ludin oo mar baatrool ka baadhaysay gabalka Ogaden, walina aad u xiisaynaysa Ethiopia, ayaa lagu eedaynayaa in uusan Ethiopia cadaadis saaraynin.
Wargays kale oo la yidhaahdo Swedish daily Svenska Dagbladet, ayaa yidhi “ciyaar siyaasadeed oo sababaysan ayey khatar ugu jiraan wariyeyaasha reer sweden in lagu xukumo 40 sano, waxayna Ethiopia doonaysaa in ay tusaale u noqdaan.”
Wargaysku waxaa uu qoray in labada wariye ay baadhayeen shaqada shirkada Ludin ee baatroolka baadhaysay iyo eedo ah in Ethiopia ay ka gaysatay xad gudubyo gabalka Ogaden. Shirkada Ludin Ethiopia waxay ka baxday labo sano ka hor, hadii ay xad gudubyo baadhayeen maxay qoryaha u wateen labada wariye ayaa isweydiin leh.
Wargaysku isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu qoray Jabhada xaq u dirirka ah ee ONLF, oo doonaysa in ay Ethiopia ka hesho xuquuq balaadhan. Wargaysyada reer Sweden lamaba socdaan in ONLF iyo Ethiopia ay heshiiyeen, kuwa sheeganaya ONLF-na in ay yihiin argagixso Al shabaab.
Wargayska oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi “wasiirkanaga arimaha dibadu hadal guud buu wadaa,laakiin kiiska wariyeyaasha wuxuu ka dhigayaa wax hooseeya.” “Hadii ay arintu dhabtii sidaas tahay, maxay ku saabsan tahay hadalhaynta xuquuqda aadamaha ee Sweden iyo canshuurta aan bixinayno ee Ethiopia lagu kaalmaynayo?
Ethiopia waa wadan baahan oo ku nool gacmaha shaqaalaha Sweden, in ay cadaadis iyo dhibaato ku hayso dad xuquuq doon ah ma aha in loo dul qaato.
Tolow wariyaha reer Sweden ee qoraalkan sameeyey intee in la egg ayuu aduunka kale la socdaa, marka wadankiisa laga tago.
“Hadii aynaan diyaar u ahayn in aan u dagaalano xoriyada warbaahinta iyo nolosha wariyeyaasha reer Sweden si cad oo aan gabasho lahayn maxaan ku faani karaa?”